Neymar Jr oo jawaab ka bixiyay waxa ka jira eedeymaha ku aadan kufsiga gabadha uu ka bartay Instagram-ka – Gool FM
Neymar Jr oo jawaab ka bixiyay waxa ka jira eedeymaha ku aadan kufsiga gabadha uu ka bartay Instagram-ka
(Paris) 02 Juunyo 2019. Weeraryahanka kooxda PSG ee Neymar Jr ayaa lagu soo eedeeyay inuu kufsi u geystay haweeney isagoo ku sugan hotel ku yaalla magaalada Paris sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya dalka faransiiska.
Booliiska ayaa helay Dukumiintiyada ay baahisay UOL Sport ayaa tilmaamaya in 27-jirkaan oo cabsan uu yimid hotel-ka 15-kii May, isla markaana uu la kulmay gabadhaan ka hor inta uusan xiddigii hore Barcelona sameynin xad gudub aysan raali ka aheyn sida la sheegay.
Laakiin Neymar Jr oo haatan ku sugan xerada tababarka ee xulka qaranka Brazil ay ugu diyaar garoobayaan Copa América 2019, kaasoo lab isbuuc ka dib ka furmi doono dalkiisa hooyo ee Brazil ayaan ka laba labeynin inuu jawaab ka bixiyo eedeymaha ku aadan kufsiga ee loo soo jeediyay.
Hadalada jawaab celinta ee Neymar Jr ayaa waxaa ka mid ahaa:
“Wixii xiligan ka dambeeya, wax walba waan soo bandhigi doonaa, si aan u caddeeyo xaqiiqda”.
“Waxa dhacay maalintaas waxay ahaayeen xiriirka u dhexeeyay rag iyo dumar ee ku dhex jiray afar derbi, sida xiriirka caadiga ah, maalintii xigtay waxba ma dhicin, waxaan sii wadnay inaan is dhaafsano fariimaha oo kaliya”.
“Waxaa la igu eedeynayaa kufsi, waa dacwad aad u culus, waan la yaabay, waa mid aad u murugo badan inaan maqlo arimahaas oo kale, sababtoo ah qofka garanaya shakhsiyadeyda iyo daacadnimadeyda, wuxuu ogyahay inaanan wax sidaas oo kale ah sameyn doonin”.
“Waxay ahayd dabin aan ku dhacay, laakiin tani waxay ii noqon doontaa cashar wixii xiligan ka dambeeya, waxaana jira dad doonaya inay ii dhiibaan, runtii waa murugo iyo xanuun”.
“Waxaan u imid Liverpool si aan u helo wakhtiyadan oo kale” - Virgil van Dijk